Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny Jona 2016
Tantara tamin'ny Jona, 2016
Tsy Misy Firenena Ho An'ny Fampihomehezana? Manenjika Ilay Indiana Mpanao Hatsikana Amin'ny Lahatsary Snapchat Ireo Mpanao Politika
Nametraka fitoriana tany amin'ny polisy ary nandrahona an'ilay mpanao hatsikana, noho ny nandefasany lahatsary mananihany miresaka ireo Indiana olo-malaza roa ireo antoko politika avy amin'ny elatra havanana Indiana.
Mikasa Hametra Ny Fidirana Amin'ny Aterineto Ho An'ny Mpiasam-panjakana i Singapaoro
"Zava-dehibe eo amin'ny toeram-piasana maoderina ny fiarovana ny solosaina, saingy tsy tokony ho fialan-tsiny hiverenana amin'ny fomba fanao adala sy ankamehana izany."
Mpanoratra Dalia Kiakilir · Azia Atsinanana
"Tokony hampiseho ny fahatoniana ireo mpitondra Eoropeana ary hanomboka haminavina indray ny Vondrona izay mifototra kokoa amin'ny vahoaka, mifandray mivantana indray amin'ireo vahoaka, fa ​​tsy hifantoka be loatra amin'ny fanjakazakan'ny mpitàna birao ao Bruxelles"
Tsy mbola nahateny ny Filoha Obama amin'ny fiangaviana hanaiky ny mpialokaloka Syriana. Saingy efa manana visa sady monina ao Etazonia, tsy amin'ny maha mpialokaloka fa amin'ny maha profesora ny Syriana sasantsasany.
28 Jona 2016
Mitaky Fanjakana Mahefa Ny Antoko Mitondra Ao Delhi, Mety Hisy Dexit Ve Aorian'ny Brexit?
Mpanoratra Sohini Chatterjee · Azia Atsimo
Tamin'ny fahazoana elatra avy amin'ny Brexit no nilazan'ny Lehiben'ny Minisitr'i New Delhi, Arvind Kejriwal, fa hisy tsy ho ela ny fitsapa-kevi-bahoaka amin'ny maha-fanjakana mahefa an'i Delhi -- fa mifanaraka amin'ny lalampanorenana ve aloha ny fitsapa-kevi-bahoaka?
Miresaka Fahalalaham-Pitenenana Amin'ny Alalan'ny Mini-Video Ny Tanora Makedoniana
"Ny zava-dehibe tokony ho takatry ny tanora dia ny tsy hamelanao azy ireo hikombom-bava, amin'izay fomba hanaovanao azy."
27 Jona 2016
Manameloka Ny Praiminisitra Ho Mihatsaravelatsihy Tamin'ny ‘Eritreriny Sy Ny Vavaka’ Nataony Ho An'i Orlando Ny Fiarahamonina LGBTQ Ao India
"Tsy ampy litera dimy manan-danja ny siokanao misy litera 110. Endri-tsoratra dimy izay manambara ny marina fa ny governemantanao dia tsy mety manaiky ny fisian'ny LGBTQ '!"
Fifandraisana Sy Fanondroana An-tsarintany Ny Herisetra Misy Aty Afrika Atsimon'i Sahara
Misy fitaovana vaovao iray ifandraisana mitsongo dia ireo herisetra ara-politika manerana an'i Afrika Atsimon'i Sahara mametraka an-tsarintany ny isan'ny maty isa-paritra, ireo fironana manavatsava fotoana, ary ireo tompon'antoka amin'izany.
25 Jona 2016
Mpanoratra Zara Rahman · Eoropa Andrefana
Ny tsy firaharahiana ny politikan'ny firenentsika no mahatonga antsika ho toy izao ankehitriny. Nampiada-tena loatra isika, ary tsy niditra tamin'ny fanapahan-kevitra sy ny politika izay nampisy fiantraikany goavana tamin'ny fiainantsika.